UPaulina Gaitan Iifoto zeNude kunye noMdibaniso oPhezulu weSondo oMdibaniso - Indawo Yolondolozo Lwembali Yomboniso
UPaulina Gaitan Iifoto zeNude kunye noMdibaniso oPhezulu weSondo oMdibaniso
Jonga ukudityaniswa okukhulu kukaPaulina Gaitan ohamba ze kunye nezesondo, wabonisa umzimba wakhe o-sexy, nawo ama-boobs amakhulu kunye ne-esile! Lo Latina wabonwa ehamba ze amaxesha amaninzi kwiscreen, kodwa eyona midlalo yakhe ibalulekileyo ehamba ze kwaba 'eNarcos' nakwi 'Diablo Guardian'.
UPaulina Gaitan Ruiz ngumdlali weqonga waseMexico oneminyaka engama-27, owaziwa ngendima yakhe enkulu kuthotho oludumileyo lweNetflix, ‘ INarcos ‘. Wadlala inkwenkwezi kumfazi omncinci ozinikeleyo woKumkani waseDolombia, uPablo Escobar. Wayengumfazi ophambili kwifilimu ethi 'Sin Nombre', apho wayedlala khona uSayra. Umfazi ojoyina utata wakhe kunye nomalume wakhe, xa bezama ukufuduka eHonduras besiya eUnited States. Kwaye ugqiba ukuhamba no-El Casper, ilungu leqela lemigulukudu.UGaitan naye wadlala kumdlalo bhanyabhanya kunye noKevin Kline. Wabonisa uSabina, indima ekhokelayo kwidrama eyoyikisayo yaseMexico ethi 'Somos Lo Que Hay'. Kwakhona, wavela kumdlalo bhanyabhanya 'En Tus Manos'. Emva koko, wayeyinxalenye yabadlali kwi-ABC Steven Spielberg uthotho 'Umlambo'. Kwi-2018, umhle uLatina waqala ukubalasela njengoVoletta, inkokheli yabasetyhini kwi'Diablo Guardián '.
UPaulina Gaitan uhambile imifanekiso
Umdlali weqonga odumileyo waseMexico uPaulina Gaitan uneebhokhwe zakhe ezintle kunye neempundu ezijikelezileyo ezikhutshiweyo ngumfana athandana naye. Ezi nudes zithathwa ngohlobo oluvuzayo, ke ngoku siza kuthatha ukuba ebengafuni ukuba ii-nudes zifikelele kumphezulu.
UPaulina Gaitan uhamba zekunye nemiboniso yesondo
‘IDiablo Guardian’ imiboniso yabantu abahamba ze
Jonga indawo yokuqala kaPaulina Gaitan ehamba ze 'Diablo Guardian', apho unokumbona ehamba ze ngokupheleleyo ebhafini kwaye epholile! Emva koko ubonakalisa amabele akhe amakhulu ekujongeni kwaye wandenza nzima njengefuck! UPaulina uneebhokhwe ezintle kunye neengono ezimnyama njengalo lonke ixesha lomlingisi weLatina!
Emva koko uPaulina Gaitan omtsha ubhengeza iititi zakhe ezintle ezinkulu kunye ne-esile kwindawo yokuhlambela. Umi phantsi kweshawari kwaye sifumana umbono ocothayo opheleleyo we-boobs yakhe yendalo enkulu kunye ne-butt enkulu enkulu. Ndingathanda ukuhlamba noPaulina!
'Diablo Guardian' imiboniso yesini
Kukho uPaulina Gaitan wokuqala ohamba ze ngesondo. Apha ungambona ekhwele umfo njengoko egxuma kwaye emkrwitsha! Ngokucacileyo uthanda isini esomeleleyo nesirhabaxa! UPaulina uneempawu zendalo ezifanelekileyo kunye ne-esile njengoko sele ubonile kule mifanekiso ingasentla!
Nantsi enye indawo yokwabelana ngesondo apho uPaulina Gaitan onwabela khona kwisini esishushu ngasemva. Ukuzo zonke iine ebhedini njengoko umfana emnika ukuba abambe nzima. Emva koko, ujika umva kwaye asinike ukujonga okuhle kumabele akhe endalo ahamba ze. Sibona iimpundu zakhe ze xa eziqengqa ebhedini konke kushushu kwaye kumanzi.
Kwakhona, umdlali we-sexy busty, uPaulina Gaitan ubonwa kwindawo yezesondo ehamba ze ebonisa ubuze bakhe! Ukhwele umfo kwaye siyawubona umzimba wakhe oze kubonakalise esipilini. Umfo ubamba ii-boobs zakhe ze ze alale naye esofeni. Tyhini mfazi!
Kule ndawo ishushu, uPaulina ulale ngesisu ekuqaleni. Unomzimba wokuzilungisa kunye nomzimba omnyama, njengoko encumile kwaye ebonakala ngathi uthixokazi. Emva koko uqengqele ebhedini nomfana, njengoko wayebonisa ubuze bakhe obuze. Indoda iyamchukumisa kwaye iyambamba!
Nanku omnye umboniso, apho sinokubona uPaulina Gaitan kwividiyo yokuhamba ze ehamba ze! Ubonisa umzimba ongenasiphelo, njengoko ii-boobs zakhe zibhabha ngelixa ekhwele umfana onezihlunu ezimhlophe.
Kushushu kushushu! Jonga indlela anomdla ngayo uPaulina Gaitan nangona ii-boobs zakhe zigutyungelwe. Uphezu kwendoda yakhe, uyamanga njengokubonisa impundu yakhe kwiimpahla zangaphantsi ezimnyama ezimnyama. Ndiyayithanda indlela yakhe yokuncuma nokuncamisa!
Umhle uPaulina Gaitan yitalente entsha, andazi ukuba ubukele iNarcos. Kodwa ukusukela oko ndandiqala ukumbona ngekhe ndiyeke ukujonga amabele endalo afezekileyo! Yonwabela lo mboniso umfutshane noPaulina ekhwele phezu kwendoda yakhe, uPablo Escobar! Ubonisa ubuze obunqunu njengoko ekhwele umyeni wakhe.
Nanku omnye umboniso ovela eNarcos, apho uPaulina Gaitan esenza kunye nendoda yakhe yonke imanzi kwaye ishushu, ngelixa oobhuti bayo begxuma. UPaulina unxibe ibra emhlophe yokubona, njengoko umntu wakhe ebancinca kwaye emenza ancwine!
'UEddie Reynolds kunye noLos Angeles ngentsimbi'
Kwimeko yokugqibela, uPaulina Gaitan ubonakalisa ii-boobs zakhe ezinkulu ezishushu kunye neesile! Ungena ze ngokupheleleyo egumbini kwaye usinika ukujonga okuhle kwi-boobs yakhe enkulu kunye neengono ezinamanzi. Emva koko sifumana umbono okhawulezileyo wempundu yakhe. Yonwabela abantu, skrolela ezantsi kwaye ukonwabele ukubukela eli bhinqa lihle ecaleni kwelinye porn abantu abadumileyo !!
Imifanekiso yesondo kaPaulina Gaitan
Kwaye emva kobunqunu obuninzi, apho uPaulina Gaitan abonise khona ama-boobs, iesile kunye nepussy, sinengqokelela yakhe emnandi. Ubonakalise ukuqaqamba kwemilenze, kunye neenyawo apha. Kwakhona, umfanekiso wakhe webhikini… uGaitan uyaphaphatheka kwaye mhle, konwabele ukubukela imifanekiso yakhe eshushu evela kumajelo asekuhlaleni kunye neemagazini!
imifanekiso enganxibanga kaDanielle evela kubavuni baseMelika
kate hudson izigcawu ezinganxibanga
Imifanekiso ye-miley cyrus's pussy